Thola inkampani ye-iPhone yakho - Discover opharetha futhi uma imahhala
Thola inkampani ye-iPhone yakho
Kuleli khasi ungathola ukuthi yini inkampani yi-iPhone yakho, okusho ukuthi, ku-opharetha ohlotshaniswa nayo ekuqaleni Ngaphezu kwalokho, ungathola futhi ukuthi kuyavumelana yini inkontileka yesikhathi noma uma sekuvele kungu khulula iPhone ifektri noma ikhishwe.
Ngale ndlela ungathola ukuthi ngabe i-iPhone oyithengile noma ohlela ukuyithenga ihlangabezana yini nezimo otshelwe zona nokuthi ingavulwa yini yi-IMEI.
1 Thola inkampani ye-iPhone yakho
2 Kungani ngifuna ukwazi ukuthi iyiphi inkampani okuyi-iPhone evela kuyo?
Sebenzisa ifomu elilandelayo ukuthola opharetha we-iPhone yakho:
Uzothola yonke idatha evela ku-iPhone yakho ku-imeyili ehambisana ne-akhawunti yakho ye-Paypal noma i-imeyili oyibhalayo uma ukhokha ngekhadi lesikweletu. Imvamisa uzothola imininingwane kungakapheli imizuzu engu-5 kuye kwengu-15, kepha ezimweni ezithile kungahle kube nokubambezeleka okufika emahoreni ayisithupha.
Opharetha: Movistar Spain
Mahhala: Cha / Yebo
Ngenkontileka ehlala njalo ehlobene nayo: Cha / Yebo, kuze kube uMeyi 16, 2015
Ukuvula i-iPhone yakho kufanele wenze okulandelayo / Awukwazi ukuvula i-iPhone yakho
Futhi uma ufisa ungahlola nokuthi ngabe i- I-iPhone ikhiyiwe yi-IMEI Ngokuyikhetha ekudonseleni phansi kokukhokha, kuzofanele ukhokhe u- € 3 noma u- $ 4 ngaphezulu.
Kungani ngifuna ukwazi ukuthi iyiphi inkampani okuyi-iPhone evela kuyo?
Kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi iyiphi inkampani oxhunywe kuyo, futhi ukuthi uma i-a I-iPhone ivinjelwe kusithwali esisodwa, Singayisebenzisa kuphela nenkampani okungeyayo. Ngale ndlela, kungaba wumthwalo ukuthola i-iPhone esetshenzisiwe engaxhunyanisiwe nenkampani yocingo esiyisebenzisayo njengamanje, ngaphezu kwalokho, Iqiniso lokuthi idivaysi imahhala iyinani elengeziwe layo, ngoba singashintshana phakathi kwezinkampani ezahlukahlukene zomakhalekhukhwini ezisinikeza amanani ancintisanayo, ngakho-ke sizogcina songa imali enhle.
Kungenxa yakho konke lokhu lapho insizakalo yethu izokuvumela ukuthi wazi kalula konke idatha ephathelene ne-iPhone, kufaka phakathi i-opharetha okungokwayo. Ngale ndlela ungavimbela izingqinamba ezingaba khona ezitholakala enkampanini yezingcingo lapho kuxhunywa khona ucingo. Unganqikazi isikhathi eside, futhi usebenzise ngokunenzuzo ukunikezwa kwethu.